Izikolo zoNyango eMzantsi Afrika zaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2022
Nalu uluhlu lwezikolo eziphezulu zonyango eMzantsi Afrika zabafundi bamanye amazwe abangabizi nje kuphela umrhumo wokufunda kodwa babonelela ngezifundo kubo nakwasekhaya abafundi bamazwe ngamazwe.
Ezi yunivesithi zibekwa phakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo eMzantsi Afrika nakwihlabathi liphela.
Phakathi kwezi zikolo, iYunivesithi yaseKapa (UCT) ithatha iminyaka emithandathu ukugqibezela isidanga sayo seBachelor of Medicine kunye neBachelor of Surgery (MBChB).
Abafundi abaphumelela nge-MBChB kwaye bagqiba iminyaka emibini yokufunda kunye nenkonzo yonyaka yoluntu bayavunyelwa liBhunga labaFundisi bezeMpilo eMzantsi Afrika ukuba basebenze njengogqirha.
Ezi zikolo zonyango eMzantsi Afrika azenzelwanga abafundi bamanye amazwe nangona kunjalo, abafundi basekhaya banenani elingakumbi kodwa isizathu sokuba sigxile kwezinye izikolo kukuba ayizizo zonke iiyunivesithi zamanye amazwe ezamkela abafundi kulo naliphi na ilizwe lehlabathi.
Ukuba ufuna ukufunda amayeza eSouthzaq2 Afrika, kuya kufuneka ujonge ezi yunivesithi kuqala; banokuba nayo impendulo kumbuzo wakho.
Apha, ndibhale nje kwizikolo zonyango eziphezulu ze-3 eMzantsi Afrika zabafundi bamazwe aphesheya avulekileyo nakwimali yokufunda. Oku kuthetha ukuba umfundi ovela kwelinye ilizwe Ngubani ofuna ukufunda eMzantsi Afrika angafunda iyeza nakwesiphi na kwezi zikolo ngezifundo!
Ndihlala ndikuxelela ukuba isifundi sesona sigqibo sithetha ukuba umfundi welinye ilizwe ongenamali yokufunda kwelinye ilizwe angazixhasa kwaye uninzi sele lukhona ekufundiseni.
Ezi yunivesithi zizezona yunivesithi iphambili eMzantsi Afrika kwezonyango, ngakumbi amayeza onyango.
The KwiYunivesithi yaseKapa (UCT) yiyunivesithi yophando yoluntu ebekwe eKapa kwiphondo laseNtshona Koloni eMzantsi Afrika.
Eyasungulwa ngo-1829, i-UCT yaba yikholeji yokuqala eMzantsi Afrika, eyenza ibe yiziko elidala lemfundo ephakamileyo eMzantsi Afrika.
Kudibanisa i-eyunivesithi endala eNingizimu Afrika kunye neyunivesithi endala kunazo zonke e-Sub-Saharan Afrika kunye neYunivesithi yaseStellenbosch eyayifumana imeko epheleleyo yeyunivesiti ngosuku olufanayo kwi-1918.
The KwiYunivesithi yaseWitwatersrand ebekwe eRhawutini, yikhampasi yophando yoluntu yaseMzantsi Afrika ekumantla mpuma weRhawuti.
IYunivesithi yaseWitwatersrand sesinye sezikolo zonyango eMzantsi Afrika zabafundi bamanye amazwe abanedumela elihle kwicandelo lezemfundo yezonyango.
IYunivesithi yaseWits ivelise oogqirha abaninzi abaqhuba kakuhle eMzantsi Afrika nakwamanye amazwe.
IYunivesithi yaziwa njengeYunivesithi yaseWits. Le yindlela nje yokugcina igama lifutshane kwaye ubuncinci kulula ukubiza.
Iyunivesithi ineengcambu zayo kwicandelo lezemigodi, njengeGoli kunye neWitwatersrand ngokubanzi kodwa zilunge kakhulu kwezonyango.
KwiYunivesithi yeStellenbosch iyunivesithi yophando yoluntu ebekwe eStellenbosch Central, eStellenbosch, idolophu ekwiphondo laseNtshona Koloni eMzantsi Afrika.
Ngobhaliso ngaphezulu kwe-30k okwangoku, iyunivesithi ihlala esinye sezikolo zezonyango eMzantsi Afrika esandisa ukwamkelwa kwabafundi bamanye amazwe kunye nabemi bomthonyama baseMzantsi Afrika.
Ndiyathemba ukuba eli nqaku liza kuvula amehlo akho ngakumbi njengomfundi wamazwe aphesheya ngokubhekisele kufundo lwamayeza eMzantsi Afrika kuba kufanelekile ukuba linike umkhombandlela ekukhetheni.
Uyacetyiswa nakanjani na ukuba undwendwele iiwebhusayithi ezichaphazelekayo zezi zikolo zonyango eMzantsi Afrika zabafundi bamanye amazwe ukuba bafunde ngakumbi kwiikhrayitheriya zabo zokwamkelwa kunye neemeko kwaye bafumane nemali abayihlawulayo ngoku. Ungacofa apha ukukhangela ezi 3 Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eMzantsi Afrika.
IYunivesithi eziThengisa ngexabiso eliphantsi eMzantsi Afrika
Uluhlu lweeKholeji zikaRhulumente zoLuntu eMzantsi Afrika
IiYunivesithi ezigqwesileyo zezoNyango eAfrika
I-MTN Foundation Scholarship
iikholeji zonyango eMzantsi Afrika zabafundi bamanye amazweIzikolo zonyango kumazwe aphesheyaIzikolo zonyango zabafundi bamanye amazweIzikolo zonyango e saIzikolo zonyango eMzantsi afrikaIzikolo zonyango eMzantsi afrika zabafundi bamanye amazweIzikolo ezikumazantsi eAfrika zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:Iiyunivesithi zamkela amanqaku e-TOEFL angama-75 nangaphantsi kwe-Internationaly
Okulandelayo Post:Izibonelelo ezi-5 eziMangalisayo kunye nezibonelelo ze-IELTS zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Pingback: IiYunivesithi ezigqwesileyo zezoNyango eMzantsi Afrika-eyona Kholeji ePhakamileyo
Pingback: IiYunivesithi eziGqwesileyo zezeMpilo eMzantsi Afrika-eyona Kholeji yaseKholeji
USharon Chellan uthi:
Julayi 30, 2020 kwi-2: 49 am
Kusasa ndingathanda ukuqala ikhondo lam kwisikolo sobugqirha.ndicela undincede .Ngoku ndisebenza phesheya kwaye ndingathanda ukulandela oku ndinokufunda umgama .ndicela uncede. intsimi engama-20 .post icu uqeqeshwe kwaye ubambe idiploma kulawulo. Ulawulo losulelo i-porfilo iminyaka emi-3 eDurban south africa. Ndingummi waseMzantsi Afrika